आईसीयूबाटै छोरीज्वाइँलाई टीका – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आईसीयूबाटै छोरीज्वाइँलाई टीका
भरतपुरस्थित सेन्ट्रल अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयूमा) फागुन ११ गते मार्मिक दृश्य देखियो ।
विगत दुई बर्षदेखि जिव्रोको क्यान्सरबाट पीडित बनेका ६० बषर्ीय परर्शुरामका एक छोरा र तीन छोरी छन् । तीमध्ये कान्छी छोरी हुन् शान्ता । कान्छी छोरीलाई ज्वाइँको हातमा सुम्पिएर मर्ने धोको थियो उनको ।
छोरीज्वाइँलाई टीका लगाएर आर्शिवाद दिएको भोलिपल्टै भट्टराईलाई छातीको दायाँ भागबाट निमोनिया फैलिएको डा. सिग्देलले बताए । ‘निमोनिया यति छिटो फैलियो कि बचाउन सकिएन, १२ गते राति झण्डै १२ बजे उहाँको निधन भयो’ डा. सिग्देलले भने ।
सेन्ट्रल अस्पतालका अंकोलोजी विभाग प्रमुख डा. गुरुचरण शाहका अनुसार परशुरामले यसअघि नै छैठौं चरणको केमो लिइसकेका थिए । भक्तपुरको क्यान्सर अस्पतालमा छैठौं चरणको केमो लगाइसकेपछि सातांै केमो लगाउन भट्टराईलाई भरतपुर रिफर गरिएको थियो ।